tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-06
Ity no vokarinay vaovao misy famolavolana kinova vaovao. Ny kitapo dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ...
Mihabetsaka ny mpanjifanay manomboka mampiasa che cheseeur hamenoana vokatra ranoka. Avy eo, inona ny che cheseur? Izy io dia fitoeran-javatra fonosana vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty harona ary ny tombony azo avy amin'ny vokatra fonosana henjana na semi-henjana, izay mahatonga ny cheeratainer ho tonga lafatra ...